Momba anay - Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd.
Yiwu Mia Imp & Exp Co., Ltd. dia niorina tao amin'ny tanànan'i Yiwu any Shina tamin'ny taona 2007, taorian'ny traikefa nandritra ny 13 taona tamin'ny fivarotana lehibe, fivarotana rojo vy, mpivarotra ambongadiny sy mpanafatra entana, ny tsipika vokatra Mia Imp & Exp dia niitatra tsikelikely avy amin'ny firavaka ka hatramin'ny kojakoja lamaody, kojakoja ho an'ny ankizy, kojakoja fanatanjahan-tena, fitehirizana dia, vokatra ara-nofo, Entana 3C, entana DIY, fety, entana biby fiompy ary entana hafa ankapobeny. Mitombo amin'ny taha 10% isan-taona ny salan'isa mandritra ny 13 taona nifanesy, ny Mia Imp & Exp, miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 100, dia nahatratra 30 tapitrisa dolara amerikana isan-taona ny varotra, ary nanome serivisy fampidirana sy fampidirana ajanona ho an'ny mpanjifa an-trano sy vahiny miangona 1000. hatramin'ny 2020.
Mba handresena amin'ireo mpifaninana dia misy biraon'ny Mia Imp & Exp any Yiwu, Hangzhou ary Guangzhou, izay mitaky an'i Shina hanohana ny vokatra mety rehetra, ny kalitao tsara indrindra ary ny vidiny ho an'ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny tranobe 5000 metatra toradroa, i Mia Imp & Exp dia namorona trano fanatobiana 3000 metatra toradroa hiantohana ny fandefasana malefaka sy efitrano fampirantiana 1000 metatra toradroa mampiseho zavatra mihoatra ny 50.000.
Mba hahatratrarana ny filan'ny famolavolana tany am-boalohany, nanangana ekipa mpamorona matihanina avy any Italia sy Japon izahay mba hiovaova hatrany. Mba hahatratrarana fifehezana kalitao dia nikarakara ekipa QA sy QC za-draharaha izahay hitazonana ny fifehezana kalitao, ary nanangana orinasan-tsika manokana Menoch Inspection Co., Ltd hahatratra ny filan'ny fifehezana kalitao avo lenta.
Mandritra izany fotoana izany, manohy manatrika ny foara amin'ny lohataona / fararano Canton izahay hatramin'ny 2007, ary manatrika foibe manokana any Hong Kong, USA, Alemana, UK, Japon ary sns. hananana vintana bebe kokoa hihaonana mivantana amin'ireo mpanjifantsika taloha, ary afaka hihaona amin'ny mpanjifa vaovao koa.
Ny tsipika ny raharaham-barotra
Mividy serivisy agence manerana an'i Sina
Miaraka amin'ireo birao any Yiwu, Hangzhou, ary Guangzhou, mamoaka sinoa hanohana ireo vokatra mety rehetra, kalitao sy vidiny tsara indrindra.
Orinasa manondrana tokana
Fitaovana lamaody, kojakoja ho an'ny ankizy, kojakoja fanatanjahan-tena, fitehirizana fitsangatsanganana, vokatra ara-pananahana, entana 3C, kojakoja DIY, fety, kojakojan'ny biby fiompy ary entam-barotra ankapobeny.
Anisan'izany ny fanaraha-maso feno, serivisy famerenana entana, fanaraha-maso avy amin'ny antoko fahatelo miaraka amin'ny tatitra fitsirihana sinoa sy anglisy.
Ny firafitry ny fikambanana
■ 13 taona traikefa amin'ny mpamatsy entana amin'ny ankapobeny amin'ny fivarotana lehibe, fivarotana rojo vy, mpivarotra ambongadiny sy mpanafatra entana.
■ TOP 10 mpanondrana mpanondrana tsy sakafo any Yiwu. Fanandramana manan-karena amin'ny fananganana tsipika vokatra vaovao ho an'ny mpanjifa.
■ Mihoatra ny Orinasa mivantana 1000.
■ 3000 metatra toradroa trano fanatobiana entana.
■ 1000 metatra toradroa tena and efitrano fampisehoana an-tserasera ao Yiwu, Hangzhou sy Guangzhou misy mihoatra ny 50.000 entana.
■ 500 metatra toradroa trano fitehirizana fanaraha-maso ao anatin'izany ny detector fanjaitra sy ny fitaovana fitiliana.
■ Professional Ekipa QA sy QC hijerena ny vokatra rehetra alohan'ny fandefasana miaraka amin'ny fenitra AQL.
■ Serivisy amin'ny fiteny maro ao anatin'izany ny anglisy, japoney, espaniola, alemà, frantsay, rosiana.
■ Professional ekipa mpamorona avy any Italia sy Japon ho an'ny vokatra sy ny famolavolana fonosana.
■ Fanohanana ara-bola sy fiantohana matanjaka.
■ Fanohanana ny teny fandoavam-bola.
■ Fantatra amin'ny fepetra fitsapana EU sy Etazonia, manome vokatra ECO-friendly, fiaraha-miasa maharitra amin'ny SGS, TUV ary BV.